Bibiolona | Hevitra MPANOHARIANA
2010-03-03 @ 06:41 in Ankapobeny
Trangam-piaraha-monina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao indray no ambara etoana. Malaza indray izao resaka bibiolona izao amin'ny faritra sasany. Roa ny toerana ankalazana azy ity fatratra dia eny Ankatso sy eny Andoharanofotsy. Fifanandrifian-javatra mampihomehy ihany rehefa dinihana.
Tamin'ny andron'ny Fanjanahantany dia nalaza dia nalaza izao mpaka ra na mpaka fo izao. Tsy niezaka ny nandiso izany sahoan-dresaka izany ny Mpanjanaka na dia mety ho henony aza io. Tsotra ny antony, mety ho ry zareo mihitsy no nihavian'ny sahoan-dresaka mba hampilamina sy hampipetraka tsara ny olona feheziny. Ny hamory ny olona tsy maintsy hipetraka an-tanàna lehibebe aza natao mba tsy hisy ny olona hitoka-monina... izany hoe tsy hisy ny olona sarotra arahi-maso... koa ny famehezana ara-psikolojika tahaka itony indray no avelavela fahatany? Inona moa ny vokany amin'ny olona? Tahotra! rehefa manjaka ny tahotra dia tsy hisy hivoaboaka any amin'ny maizina any... vita ho azy ny "tsy fahazoana mivoaka sy mivezivezy amin'ny alina". Koa tsy atao ho mahagaga raha niara-nanjavona tamin'ny fanjanahantany ny resaka mpaka ra sy maka fo avy eo. Ny lafitsaran'ilay zavatra dia nilamina tokoa amin'ny ankapbeny ny tanàna satria manana tahotra mbamin'izay mety ho mpangalatra tsinona.
Tsy naheno momba tsahotsahon-javatra tahaka izany loatra intsony aho taty aoriana afa-tsy nyhoe misy sarety mandehandeha izao amin'ny alina nefa tsy hita ilay sarety sy ny karazany. Fa nisy fotoana nanana ny lazany ny boky tantara an-tsary ka anisan'izany ny "Koditra". Ny tena nalaza indrindra tamin'ny boky "koditra" dia ny tantaran'ilay bibiolona nantsoina hoe "Bobel". Rehefa nanakaiky ny fandrodanana voalohany ny Amiraly, ka anisan'ny nanao andrimasom-pokonolona ny tena (sady tanora mavitrika ihany koa moa) dia nalaza fatratra ny resaka valamaty, ka tao indrindra ny filazana fa misy bibiolona ao amin'ny Lapan'Iavoloha ao. Ny hafatra ambadika dia hoe izay mahasahisahy manafika aty dia i Bobel no hitsena anareo sady mihinan-dra (vampire!) sy mihinan'olona mihitsy izy. Vokany : Angaha nisy nahasahy nanafika izany Iavoloha izany ankoatra ilay diaben'ny fahafahana natao ny 10 aogositra 1991 satria vahoaka be kosa ve! Rehefa niala tao Ratsiraka dia tsy hita niaraka taminy ihany koa i Bobel na nandositra mialoha fa tsy tiana nentina tany Andafy!
Nandritra ny fanonganana an-d Ravalomanana indray dia fantatra fa tsy misy bibiolona tao Iavoloha ary tsy misy bibiolona ihany koa ao Ambohitsorohitra dia sahy notafihina avy hatrany. Koa satria moa tsy nampiasa ny tetika fampiasan'ny mpitondra teo aloha mamoron-dainga hampatahotra ny lapa na ny toerana iray ny filoha Ravalomanana tamin'ny fotoana nitondrany dia nodradradradraina indray fa mivavaka amin'ny osy io rangahy io. Nojerena amin'izay fa feno sary sokitra ondrilahy sy osy vita tamin'ny biriky tanimanga tany antokotanin-dapa ary dia noadinoina tao an-dapa koa ny osikely volamena na ankoso-bolamena izay mety ho lafolafo ihany ny vidiny... efa ela tsy nipetrahana intsony anefa io lapa io tamin'izany fotoana izany. Saingy izao no tena izy: Tsy sahy notafihin ny lapa tamin'ny andron-d Ratsiraka satria nanana fitaovam-piadiana mankoana sy bala manokana ny vondro-tafika mpiaro ny filoha ary nisy aza ny nahasahy niteny fa raha nifanandrina ny samy miaramila dia ny miaramila hafa no lany bala mialoha ny miaramilan'ny mpiandry lapa. Sahy notafihina kosa ny lapa tamin'ny andron-d Ravalomanana satria tsy nanana vondro-tafika manokana ny mpiambinia ny filoha ary tsy ary fiadiana mihoatra noho ny hafa ny mpiambina ny filoha. Any amin'ny hafa kokoa noho izany ny hery.
Mandia ny taona 2010 indray isika dia indro fa nitsangana tamin'ny maty i Bobel. Toa mandehandeha ao Ankatso sy any Andoharanofotsy any ho any izy ity na izy ireo. Misotro ran'alika sy ran-saka ary ram-biby hafa izy ity ka tsy fantatra na ankafiziny na tsia ny ran'olombelona fa aleo mailo ihany. Vokany, tsy misy loatra ny mahasahy mandehandeha amin'ny alina any amin'ireo faritra ireo. Mifampiambina ihany koa ny mpianatra nefa tsy hahasahy hivoaka ny faritr amisy azy fandrao voampanga ho bibiolona eo. Dia tsy misy noho izany ny fivoriana mety hisy amin'ny alina hanomanana grevy any Ankatso. Dia mety hilamina ny tanàna ka handry fehizay ny mpitondra. Eny Andoharanofotsy indray moa misy miaramila somary madiditra eny, mpiambina ny mpikambana FAT iray malaza amin'izao fotoana izao, raha ny lazany amin'ny gazety no itarafana azy ka hisorohana izay mety ho fitsikilovana izay mitranga any dia nasiana porofo ny fahaveloman'i Bobel indray. Dia amin'izay fotoana izay ihany koa dia tsy hisy ny hahasahy hanafitafika eny.
Dia lasa ny saina mieritreritra izany rehetra izany: mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo ve dia mety hojonoin'i Bobel tahaka izany? Ka ny tena fatratra koa dia gazety ihany no teny minia manaparitaka azy ity, dia ny gazety noheverina ho mpitaiza sy hanazava amin'ny olona fa tsy natao hampitahotra ny mpinomino foana. Sady ny mahahenjana azy ity dia tsy mety ho hita maso mihitsy i Bobel fa ny "asany" ihany no manaporofo ny fisiany. Na izany na tsy izany ny Bobel efa hitako aloha dia manana tanana ho fitaovam-pamonoana tsy azo ivalozana antsoina amin'ny teny Rosiana hoe Kalachnikov ho an'izay nianatra teny Rosiana. Ary ny vavany tsy mitsahatra ny miteny lainga mandrakariva na dia mivovò mandrakariva amin'ny teny Alemana hoe :"Wow! Wow! wow!" aza ka raha gasiana dia mody asiana -ka na -tra na -na, rehefa nampitahaina ny fanatsaram-peo dia ny -ka no mety amin'ny indrindra ka saiky notononina hoe wowka. Tsy mety amin'ny teny malagasy moa ny w koa ny teny mety amin'ny indrindra dia hoe "Vahoaka".
Angano! angano! à rire à rire! tsy izaho no mpandainga fa ny gazety malagasy ihany no tena mankalaza hoe velona i Bobel ka mitandrema sao mifanena aminy.
Jentilisa, 03 marsa 2010 amin'ny 00:45
Biby olona ê !!!!!!!!!!!!!!!!
Nampidirin'i Ramatahora @ 18:27, 2010-03-03 [Valio]